सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले पेशेवर अपराधीको शैलीमा आफ्नै श्रीमतीको क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको खुलासाले ख्याती श्रेष्ठ हत्या प्रकरणलाई स्मरण गराएको छ । केही वर्षअघि एउटा आपराधिक मनोवृत्तिले ग्रस्त वीरेन श्रेष्ठले जुबिलियन्ट कलेजकी छात्रा ख्यातीलाई अपहरण गरी अन्यन्त पाशविक ढंगले शरीर टुक्राटुक्रा पारी हत्या गरेको घटना यसैगरी सार्वजनिक हुँदा धेरैको मुटु काँपेको थियो । अहिले सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी भक्षक बन्दै आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको घटनाले पुनः समाजलाई भयभीत बनाएको छ । यो प्रकरणले अभियुक्त कोइरालाप्रति घृणा र आक्रोश मात्रै जगाएको छैन, सिंगो सुरक्षा संयन्त्रमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ । नागरिकको सुरक्षा गर्ने, कानुनको परिपालाना गर्ने दायित्व बोकेकाहरू नै जब त्यो घेरो तोड्दै अमानवीय र जघन्य अपराध गर्न उद्यत रहन्छन् भने त्यो समाजमा सर्वसाधारणले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ? कसरी विधि र कानुनको परिपालना हुने निश्चितता गर्ने ? यो प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
हत्या-हिंसा र अपहरणको त्रासबाट नेपाली समाज मुक्त छैन । विधि र कानुनको प्रभावकारी …
के भएथ्यो त्यो दिन ?
काठमाडौ, माघ १० - पुस २७ गते बिहान साढे ९ बजे कोइरालाले चालक रामकुमार गुरुङलाई तयार रहन निर्देशन दिए । खाना खाँदै गरेका गुरुङ तत्काल तयार भए । एकैछिनमा डीआईजी कोइराला जेठो छोरालाई गाडीको अघिल्लो सिटमा राखेर आफै गाडी चलाउँदै हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी कार्यालय आए । कोइरालाले चालक गुरुङलाई पछिल्लो सिटमा बस्न भने । त्यसपछि गाडी चपलीतर्फ हुइँकियो । गुरुङ चपलीको त्यो घरमा पहिलोपल्ट पुगेका थिए । कोइरालाले चीनबाट आउँदा कान्छो छोरालाई ल्याइदिएको जुत्ता, ज्याकेट र पाइन्ट गाडीमै थियो । उनले घरको गेटमा पुगेर गाडी रोकेपछि छोरालाई जुत्ता गाडीमै लगाइदिने भन्दै ज्याकेट र पाइन्ट लिएर आउन भने । गुरुङलाई चाहिँ गाडी घुमाउँदै गर भने । गुरुङले गाडी घुमाए, त्यसमा लागेको फोहोर पुस्दै गर्दा १० मिनेटजतिमा बाबु र दुई छोरा आइपुगे । फेरि पनि कोइरालाले नै गाडी हाँके । महाराजगन्जको भाटभटेनीमा केहीबेर छोराका लागि खानेकुरा खरिद गरे । अनि गुरुङलाई छोरा लिएर हल्चोक पछाडि रहेको घर जान अह्राए, जहाँ कोइरालाकी आमा, जेठो छोरा र उनी बस्दै आएका थिए । चालकले कुन बेला आउने भन्दा पछि फोन गर्छु भनेका थिए । गुरुङ हल्चोक आए । फोन आ…
यसरी गरे डीआईजीले पत्नीहत्या
काठमाडौ, माघ १० - सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या नियोजित रूपमा एक्लैले गरेको अनुसन्धानहरूबाट खुलेको छ । कोइरालाको बयान, घटनाको प्रकृति र उनका चालकले दिएको बयानसमेतबाट यो तथ्य फेला परेको हो । पक्राउ परेलगत्तैको बयानमा ४ लाख रुपैयाँ दिएर अरूलाई हत्या गर्न लगाएको बताएका कोइरालाले थप बयानका क्रममा आफैले मारेको स्विकारेका हुन् । तर अझै पनि उनले दिएको बयान सत्य हो/होइन अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । कोइरालाले प्रारम्भिक सोधपुछमा पुस २७ गते बिहान घर पुगेर छोरालाई लिएर हिँडेको बताएका छन् । छोरालाई लिएर सुन्धाराको सिभिल मल र भाटभटेनीमा सपिङ गरिरहेका बेला गीताले फोन गरेपछि आफू फेरि घर गएको बताएका छन् । 'गीताले दुई छोराको व्रतबन्धबारे कुरा गर्नुछ, आउनु भनेर फोन गरेपछि म फेरि गएको थिएँ,' कोइरालाले बयानमा भनेका छन् । त्यसपछि चालकलाई छोरा घुमाउनु भनेर आफू ट्याक्सी लिएर चपलीस्थित घर गएको उनको बयान छ । 'गफ गरिरहेका बेला हामीबीच कुरा मिलेन, उसलाई एक थपड हानें,' कोइरालाले प्रहरीलाई भनेका छन्, 'अझ रिस उठाएपछ…
काठमाडौ, माघ ९ - सशस्त्रका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान निकै फितलो देखिएको छ । प्रहरीले पीडितको उजुरीभन्दा 'डीआईजी' भएकैले पीडक कोइरालाको कुरा बढी पत्याउँदा अपराधको खुलासा निकै ढिलो गरी भयो, जसका कारण पीडित पक्ष वास्तविक तथ्य नपाएर निकै दिन तनावमा रहनुपर्‍यो । अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले शनिबार मकवानपुरको पालुङमा पुनः पुगेका कोइरालालाई स्थानीय युवाले केरकार नगरेको भए घटनाको खुलासाका लागि अझै विलम्ब हुने थियो । स्थानीय युवाले कोइरालालाई तबसम्म छाडेनन्, जबसम्म स्थानीय प्रहरी आएन । स्थानीय प्रहरीमार्फत कोइराला पालुङ पुगेको खबर केन्द्रको प्रहरीले पायो र सोही स्थानमा पुस २८ मा शव बरामद भएको कडीसँग जोड्दामात्र प्रहरीले त्यो अपराध कोइरालाले नै गराएको हो कि भन्ने 'शंका' सम्म गर्ने मौका पायो । अपराध महाशाखाका एक उच्च अधिकृतका अनुसार पालुङका युवाले कोइरालालाई संदिग्ध स्थितिमा फेला नपारेको भए कानुनका रक्षक भक्षक भइसकेको खुलासा हुन अझै केही दिन लाग्थ्यो । पीडितको पटक-पटकको आग्रहपछि प्रहरीले…
प्रतिमा बाँस्कोटा काठमाडौ, माघ ९ - सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका छन् । प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेपछि कोइरालाले पुस २७ गते बूढानीलकण्ठ चपलीस्थित घरबाट बेपत्ता गीतालाई आफैंले हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । उपत्यका छिर्दै गरेका उनलाई नागढुंगामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको दुई घन्टापछि कोइरालाले श्रीमती मारेको स्वीकार गरेका थिए । काठमाडौं परिसरका एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकक्षमा राखेर उनलाई श्रेष्ठ र अपराध महाशाखाका एसपी सुरेशविक्रम शाहले सोधपुछ गरेका थिए । एसपीद्वय पक्राउ गरेर ल्याई पुर्‍याउनुअघि नै सोधपुछका लागि तयार भएर बसेका थिए । ल्याउनेबित्तिकै सोफामा बसाएर प्रमाण फेला पारिसकेकाले उम्कन नसक्ने भन्दै सोधपुछ थालिएको थियो । केहीबेर नबोली बसेका उनले 'आई ह्याभ डन, आई एम गन' (मैले गरेको हुँ, म खत्तम भएँ) भन्दै टाउको समाएका थिए । 'उनी सुरुमा मान्न तयार थिएनन्, अत्तालिएका उनले उम्कने सम्भावना नदेखेपछि अपराध स्वीकार गरे,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भन…
अपहरणकर्ता गुप्ताद्वारा 'मध्यस्थकर्ता' को नाटक पनि
प्रतिमा बाँस्कोटा काठमाडौ, माघ ४ - पूर्वमन्त्री तथा सभासद श्यामसुन्दर गुप्ताले व्यवसायी पवन संघईको अपहरणमा संलग्न भए पनि पीडित परिवारलाई चाहिँ अपहरितलाई मुक्त गराइदिने मध्यस्थकर्ताको नाटक गरेर फिरौती हात पारेको खुलेको छ । 'अपहरणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो,' महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी देवेन्द्र सुवेदीले भने, 'अर्कातिर पीडित परिवारसँग मध्यस्थकर्ता जस्तो भूमिका खेलेका थिए ।' गत पुस ७ गते कमलादी गणेशस्थान अपहरणमा परेका संघई फिरौती बुझाएर २७ गते मुक्त भएका थिए । प्रहरीले गुप्ताको योजनामा अपहरणमा संलग्न गुप्तासहित ५ जनालाई पक्राउ गरेपछि उनको यस्तो बहुरंगी भूमिका खुलेको हो । पक्राउ परेका चारै जनाले ६५ वर्षीय सभासद गुप्ताको योजनामा अपहरण तथा फिरौती असुलीलाई कार्यान्वयन गरेको बयान दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा तिनीहरूले गुप्ताकै अघि यस्तो बताएका थिए । अपहरणमा गुप्ता मुख्य योजनाकार रहेको एसएसपी सुवेदीले बताए । 'लामो अनुसन्धान र थुप्रै प्रमाणबाट गुप्ताको संलग्नता पुष्टि भयो,' उनले थपे । अपहरणमा संलग्न आकाश लामा र विकास लामा भनिने जितबहादुर गोले आइतबार ह…
अपहरण अभियोगमा सभासद गुप्ता पक्राउ
टेलिफोन कलडिटेलका आधारमा संलग्नता पुष्टि भयो
काठमाडौ, माघ ३ - उद्यमी पवन संघईको अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा सभासद श्यामसुन्दर गुप्तालाई सोमबार भैरहवाबाट पक्राउ गरिएको छ । छोरा राकेशको मंगलबार हुने बिहेको तयारीमा व्यस्त सभासद गुप्तालाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ मिलनचौकस्थित घरबाटै प्रहरीले दिउँसो साढे ३ बजे पक्राउ गरेको हो । संलग्नताको शंकामा उनका चालक अमित आचार्यलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 'संघई मुक्त हुनु केही दिनअगावै टेलिफोनको कलडिटेलका आधारमा गुप्ताको संलग्नता पुष्टि भएको थियो,' अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो, 'तर सभासद भएकाले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन केही समय लाग्यो ।' संलग्न दुई अभियुक्तलाई महाशाखाले आइतबार हेटौंडामा पक्राउ गरेपछि गुप्तालाई पक्राउ गर्न प्रमाण जुटेको स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीले मकवानपुरका जितबहादुर गोलेलाई २ लाख तथा काभ्रेका आकाश लामालाई ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले गुप्तामार्फत ४/४ लाख रुपैयाँ पाएको महाशाखाले जनाएको छ । संघईलाई काभ्रेको सस्र्युंखर्कस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएर ८५ लाख रुपैया…
अपहरणकर्ता गुप्ताद्वारा 'मध्यस्थकर्ता' को नाटक पनि...
'सरकार सुरक्षामा संवेदनशील देखिएन’
राजधानीमा उच्च सुरक्षा सतर्कता
मिर्जादेखि युनुस सम्मः हमलाको उद्देश्य एउटै
फैजानको हत्या, पुरानै शृंखलाको निरन्तरता